Kusukela ngaleso sikhathi, ngo-2009, umkhankaso umugqa omusha perfume Guerlain «Idylle», amazwana abayeki "ukucula izinkondlo ukuba" lezi flavour. Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi yokuthi indlu fashion kwafika komthaki abasha futhi ohahela isikhundla Terri Vasser, ngubani bajoyine Scion lokugcina uJean-Paul Guerlain lwamakhosi. Vasseur wayazi ukuthi DEBUT yimpumelelo ngezindlela eziningi inquma umsebenzi esikhathini esizayo, ngakho wazama ukwenza "Idyll" Ekuqaleni waba wobuciko. Igama ihlangabezana okuqukethwe kwe-isitsha: kusukela amanothi yokuqala uzizwa ukuthula, injabulo yokuphila, kuvumelana kwalo.
Naphezu kweqiniso lokuthi Guerlain Idylle wayehlele ukuba izethameli eziqondiwe nabesifazane abasebasha futhi esebenzayo yesimanje, wathola ugqozi in izinganekwane lasendulo Wasser. I iphunga laphefumulelwa legend of uthando uZeyusi 'ngokuba Danae enhle. Uguqulwe ube imvula segolide, 'uyise wonkulunkulu' wafafaza embhedeni indlovukazi yakhe. Ngakho-ke, iphunga ngokushesha libhekene njengesenzo sokunethezeka, othandekayo. Akazange ukwenaba, hhayi ahlotshiswe hhayi Kitsch. Umlando uthando ethambile owawusekelwe laqanjwa lapho inothi alawula umusa rose. Futhi hhayi oyedwa, eziningana izinhlobo zabo, okuyinto, lihambisana namanye ngamakha ezimibalabala futhi chypre Evumelana udale le idyll.
Alchemist Terri Vasser owasungula elixir ngempela uthando. Ukuhlolwa ngezimbali, kangakanani ukuhlukanisa izinhlobo ezifana, okuyinto, ngaphezu amaphunga ezimibalabala, ukuze Iphunga and izithelo. Ngakho, isisekelo Guerlain Idylle walala amacembe eBulgaria 2008 sokuvuna, athwale izingodo aye nazo imibala raspberry sesivuthiwe futhi Lychee angavamile. Ukuze lokhu ingezwe kwenye imbali rose - ibanga Plessis Robinson, futhi izithelo ukulele. Isixha ezimibalabala okwakuthandelene njengoba jasmine, Belaya Liliya, mnene entwasahlobo lily esigodini, freesia elicwengisiswe, entwasahlobo Lilac kanye peony esiqinile. Konke lokhu kucace, fresh imbali liyithela imvula phezu efudumele, embhedeni languid we-must futhi patchouli.
Ukwakheka Guerlain Idylle okunethezeka, uthandeka kanjani, emnandi. Kuyinto engenakwenzeka hhayi isigqoko. Imimoya ukunikeza umnikazi walo i aura ukuzethemba ethule amandla charm yabo siqu kanye magic Luhambo. Zephyr, kancane elimnandi, ukufudumala ezizungezile chaphaza of patchouli wezwakalisa jasmine. Rose evelele echo dlidliza, kancane kancane ucime. Othanda amalungiselelo flower uphawu ukumelana ukunambitheka (ngoba isakhiwo kuhlanganisa amber), kanye ibhodlela elikhulu, adalwe umklami Ora Ito.
Guerlain Idylle Iphunga wadedelwa ngesimo yangasese kanye amanzi anamakha. Le iphunga kuyinto eliphezulu abesifazane ngaphansi iminyaka engamashumi amane, futhi kufanelekile okukhipha nsuku zonke kanye ngezikhathi ezikhethekile. Ngobusuku imijiva Ukwakheka "umsindo" sokunethezeka, njengomuntu cashmere eziyigugu, futhi izingubo ezisemadolobheni - lula futhi romantic, sengathi likhona kasilika isikhafu umoya ohelezayo entwasahlobo.
Khangisa Iphunga amasha amavidiyo amabili, lapho njengoba wasenganekwaneni uthando imibhangqwana (uZeyusi Danae) Ifaka jazz guitarist Tom Dyutronk nomlingisikazi Nora Arnezeder, fashion house wasiphakamisa ukuhluka. Ngo-2011, it yethulwa izingoma ezimbili by Guerlain: «Idylle Duet» futhi «Idylle Eau ayinhloko». Balondoloza umqondo waphezulu wachela imvula, kodwa "Duet", okuthiwa futhi «Jasmin-Lilas», kukhona umoya "weziNkulungwane Omunye Nights." ako Sweet of Indian jasmine sambac, okuyinto wayeke kuphela yasetshenziswa namasiko enkolo wamaHindu, kukhona wamavukelambuso ngempela. languor zabo ezivusa inkanuko sashintsha ubumsulwa obucayi Lilac omhlophe.
Stone ambozwe - emakhiyubhi ubuchwepheshe